Soomaaliya oo ka qeyb-gashay shirka xog-hayayaasha Guud ee Midowga Baarlamaanadda Dowladaha Islaamka – Kalfadhi
Soomaaliya oo ka qeyb-gashay shirka xog-hayayaasha Guud ee Midowga Baarlamaanadda Dowladaha Islaamka
Magaaladda Ouagadougou (Waakadhugu) ee Caasimadda Dalka Burkina Faso waxaa shalay ka dhacay Shirka Xog-hayayaasha guud ee Midowga Baarlamaanadda Dowladaha Islaamka.
Kulanka waxaa uu hor-udhac u ahaa kalfadhiga 15-aad ee guddoomiyaasha Baarlamaanka ee Midowga Baarlamaanadda Dowladaha Islaamka, kaas oo dhawaan ka dhici doono magaaladda Ouagadougou.
Xog-hayaha guud ee Golaha Shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo Soomaaliya shirkan ku matalayay, sidoo kalenna ka qeyb ah wafdiga Guddoomiyaha Golaha shacabka ee maalmahan jooga dalkan Burkina Faso ayaa sheegay in shirkan looga hadlay waxyaabihii ka qabsoomay ama ka hir-galay qodobadii shirarkii horey u dhacay kasoo baxay.
Shirka sidoo kale waxaa looga hadlay joogteynta xiriirka xog-hayaasha guud iyo sidii tababar aqoontooda kor loogu qaadaayo loo siin lahaa shaqaallaha Midowga Baarlamaanadda Dowladaha Islaamka.
Dhinaca kale, waxaa isla xarunta uu ka dhici doono shir-weynaha Midowga Baarlamaanadda Dowladaha Islaamka ka dhacay shir kale oo ajendihiisu uu ahaa wadatashi guud iyo dib-u-habeyn lagu sameynayay gudi hoosaadyada Baarlamaaanadda dalalka ay leeyihiin. Soomaaliya, waxaa ay xubin ka noqotay Guddiga Xuquuqul Insaanka iyo Arrimaha Haweenka oo ay ku wada Jiraan Dalalka Baxreyn, Falastiin iyo Libya.
Ugu dambeyntii xubnaha ka socda Midowga Baarlamaanadda Dowladaha Islaamka ayaa yeeshay shir gaar ah oo looga hadlayay qadiyada Falastiin oo dhamaan ka qeyb galayaasha ay aad uga hadleen sida ay uga go’antahay difaaca qadiyada Falastiin.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka qeyb-gallay kulan lagu qabtay dalka Burkiina Faso
Baarlamaanka Galmudug oo dhageysanaya khudbadaha musharaxiinta Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeennada